Linux wachi haisi chinhu chitsva. Ivo vaivapo makore makumi maviri apfuura | Linux Vakapindwa muropa
Iyo IBM Watchpad yaive imwe yemawadhi ekutanga akangwara.
Mawachi ane Linux haazi chinhu chitsva. Muchokwadi, ivo chimwe chinhu chekare zvekuti yekutanga neyechitatu ye Iyo mienzaniso yemawadhi akangwara munhoroondo, vaiishandisa sisitimu yekushandisa.
Nhau dzekutanga kwe PineTime ndiyo pembedzo yakanaka yekurangarira aya ekutanga mamodheru. Uye, sezvinei, pokana kutenda kwevakawanda venhau venhau kuti indasitiri yemakomputa yakagadzirwa naSteve Jobs mumazuva matanhatu. Wechinomwe akazorora.
Muna 1998, Linux Nyaya yakashuma iyo chitarisiko chemuenzaniso wekutanga. Pamusoro pekuudza nguva, yakashandira videoconferences. Iyo sisitimu yaida mutepfenyuro uyo waive wakavanzwa pasi pehembe. Chikwata chaigona fambisa mifananidzo pachiyero chemafuremu manomwe pasekondi ine 24-bit ruvara kudzika. Mifananidzo inogona kutaridzwa pane yayo 640 × 480 pixel skrini.
Iyo wachi yaive nema modes maviri:
CHAKAvanzika basa iro parinosarudzwa, rinovanza hwindo rekoniferensi nekudzima iko kujeka kweiyo Masikati, kuitira kuti wachi iite seyakajairika wachi (chete iyo wachi iyo inozadza iyo yose 640 × 480 pixel skrini inoratidzwa).
Iko OPEN basa rinobvisa iyo SECRET basa uye kuvhurazve iyo vhidhiyo yemusangano musangano.
Panguva yekuburitswa, zvakanzi software yese yaiwanikwa pasi pemarezinesi eGNU GPL
Muna 2000 IBM yakatanga iyo Watchpad
Iyi modhi yaive nezvimwe zvakati wandei maficha. Yaive ne QVGA liquid crystal kuratidza cKugadziriswa kwayo kwaive 320 × 240 pixels mune nhema uye chena. Iyo kubatana kwakaitwa neBluetooth, IrDA YRS232C uye yakauya nebhatiri kweupenyu hwese. Sezvo inoshanda system yanga ichishandisa Linux v2.4. Zvinoenderana nekushambadzira kwenguva kwete kwete chete Yakashanda semubatsiri wega asiwo kudzora PC.
Maererano ne IBM institutional mawebhusaiti, iyo femu yakaramba ichishanda pamawachi ayo kusvika muna2011, ichisanganisa zvigadzirwa senge yakakwira resolution yechiedza mwenje inoburitsa diode (OLED) kuratidza kana kugona kwekudyidzana kwechigadzirwa uye software yeWebSphere. Panyaya yekubatana, wachi yakazoenderana neiyo IPv6 protocol.
Nekudaro, kuve nechimwe chinhu senge wachi neLinux, isu vatengi taifanira kumirira kuti vaoneke yekutanga mhando dzeApple muna2014.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux wachi haisi chinhu chitsva. Ivo varipo pamberi peApple Watch
Unoziva here kwaunogona kutora aya ekare smart mawatch? Ndinoda kuva neumwe, seuyo ari pamufananidzo.
Linux 5.3: nyowani kernel vhezheni yava kuwanikwa